Safarka Farmaajo ee Imaaraadka, rajada laga leeyahay iyo walaac weyn oo soo wajahay kooxaha mashaariicda soo qaatay - Caasimada Online
Home Warar Safarka Farmaajo ee Imaaraadka, rajada laga leeyahay iyo walaac weyn oo soo...
Safarka Farmaajo ee Imaaraadka, rajada laga leeyahay iyo walaac weyn oo soo wajahay kooxaha mashaariicda soo qaatay
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu u dhoofo dalka Imaaraadka Carabta.
Haddaba arrintaas ayaa walaac ku abuurtay kooxo iyo Shakhsiyaad badan oo mashaariic kasoo qaatay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana warbixintaan ku eegi doonaa Safarka Madaxweynaha, Waxyaabaha looga hadli doono, natiijada laga filan karo iyo Saameynta ay kooxaha dowladda ku kacsan ku yeelan doonto safarkaan.
Safarka Madaxweyne Farmaajo iyo ujeedkiisa:
Yaa codsado Safarka Farmaajo ee Imaaraadka?
Shabakadda Caasimadda Online ayaa heshay xog rasmi ah oo ku saabsan cidda dalbatay kulanka deg deg ah oo ay yeelan doonaan Madaxweyne Farmaajo iyo Mohammed bin Zayed Al Nahyan, waxaana naloo xaqiijiyey inuu Casuumaadaas lahaa Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa Madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu booqasho ku imaado dalka Imaaraadka Carabta si looga heshiiyo waxyaabihii la isku heystay, gaar ahaan in dowladda Soomaaliya loo dhaafo go’aanka dhex dhexaadka ah oo ay ka qaadatay Khilaafka Dowladaha Walaalaha ah ee Khaliijka.
Maxaa ku qasbay Mohammed bin Zayed Al Nahyan inuu Casuumadaan u fidiyo Farmaajo?
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan Magaalada Muqdisho isugu keentay dhammaan madaxda maamul Goboleedyada Soomaaliya oo ka hor imaaday mowqifkii dowladda ee Khilaafka Dowladaha Khaliijka.
Sida aan xogta rasmiga ah ku helnay dowladda Soomaaliya ayaa madaxda maamul Goboleedyada ku qancisay inay dowladda Soomaaliya kaga dambeeyaan go’aanada Arrimaha Debadda maadaama uu sidaas Dastuurka qabo.
Inkastoo aan War Saxaafadeedkii kasoo baxay Shirkii Dowladda iyo Maamul Goboleedyada ee Muqdisho lagu sheegin go’aanka laga qaatay Khilaafka dowladaha Khaliijka, haddana waxaa muuqato inay arrintaas ku guuleystay dowladda Soomaaliya maadaama aysan go’aankeedii ka noqon, waxayna arrintaas caddeyn u tahay in Maamul Goboleedyada lagu qanciyey inay dowladda kaga dambeeyaan Arrimaha Debadda.
Markii ay sidaas dhacday, dowladda Imaaraadka Caranta ayaa dareentay culeys weyn, waxayna go’aan ku gaartay inay heshiis la gaarto dowladda dhexe, maadaama ay tahay awoodda kaliya ee leh go’aanada Arrimaha Debadda.
Rajada laga leeyahay Kulanka Farmaajo iyo Mohammed bin Zayed Al Nahyan
Kulankaan oo ah mid xasaasi ah ayaa la filayaa inay labada dowladood isku raacaan inay Muqaddas tahay madax banaanida Soomaaliya isla markaasna dowladda Soomaaliya loo daayo go’aankeeda ku aadan Khilaafka Dowladaha Khaliijka sida ay sameeyeen Dowladaha Sacuudiga iyo Masar oo xiriir fiican la leh dowladda Soomaaliya iyadoo og inay dhex dhexaad ka tahay Khilaafka dowladaha Khaliijka.
Illo wareedyo rasmi ah oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa Caasimadda Online u xaqiijiyey inay jirto rajo weyn oo laga leeyahay inay labada dowladood heshisi rasmi ah gaaraan, isla markaasna ay Imaraadka Joojiso Mashaariicda ay siineyso kooxaha dowladda dhibaatada ku hayo ee Muqdisho ku sugan.
Saameynta Safarka Farmaajo ee Kooxaha Mucaaradka:
Waxaa jiro Walaac weyn oo usoo horday kooxaha ku kacsan dowladda Soomaaliya ee mashaariicda kasoo qaatay dalka Imaaraadka Carabta oo uu ugu horreeyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Muqdisho ka wado olole aad u weyn oo dowladda Soomaaliya looga soo horjeedo.
Waxay u muuqataa in Safarka madaxweyne Farmaajo uu soo xiri doono Suuqii ugu dambeeyay ee kooxda Muqdisho looga yaqaan Danleey, maadaama uu Imaaraadku ahaa wadanka kaliya ee arrintaas ku garab siinayey.
Kooxdan oo horey lacago uga heli jirtay Dowladda UAE ayaa ka welwelsan heshiis laga gaari mugdiga ku kala dhex jira dowladaha Soomaaliya iyo UAE.
Kooxdan oo dooneysa in ay dadaal dheeri ah ku bixiso sidii loo tuuri Ra’isulwasaare Khayre si ay u helaan xilal wasiir ayaa u arka Safarka Madaxweynaha mid halis ku ah mashruucooda.
Kooxaha Mucaaradka oo Bilaabay Olole ay ku carqaladeenayaan Safarka Farmaajo:
Kooxda Mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya ee cabsida ka qabta in maalmaha soo socdo lasoo xiro mashruucii Imaaraadka Carabta ee lagu dhibaateenayey dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka bilaabay olole cusub oo lagu doonayo in lagu carqaladeeyo Safarka Farmaajo ama looga bixiyo muuqaal qaldan.
Xogta aan Muqdisho ka heleyno ayaa muujineysa inuu Cabdiraxmaan Cabshakuu Muqdisho ka bilaabay qorista dhallinyaro gaareyso ilaa 50, kuwaas oo la doonayo inay barahooda Bulshada ku faafinayaan in Safarka Imaaraadka Carabta uu yahay mid uu dalbaday Madaxweyne Farmaajo, iyagoo sheegi doono inuu Farmaajo halkaas u tagayo sidii uu isaga soo sir siri lahaa dowladda Imaaraadka Carabta.
Mashruucaan ayaa waxaa 20 Kun oo Dollar ku bixinayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo doonayo inuusan soo xirmin mashruuca Imaaraadka Carabta ee ah in la carqaladeeyo geedi socodka dowladda Soomaaliya oo aan jirin hal sano.
Miisaaniyad dhan $20 kun ayaa loo qoondeeyay, waxaana maamuli doona horjooge loo asteeyay inuu hawsha Fududeeyo, waxaana xusid mudan inay kamid yihiin Shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo garab siinayo kooxaha Mucaaradka ah.